Sida loo ogaado adkaanta biyaha guriga
Ku adkaanta biyaha-cabitaanka waxaa loo yaqaannaa adag. Dukumeentiga asalka ah ee horumarinta Tilmaamaha WHO ee Tayada-Biyaha Cabbitaanka / Biyaha WHO oo ay ku jiraan maaddooyin sare oo milix ah oo macdan ah, badi kalsiyum iyo magnesium. milixdu si sahal ah ayay u soo da'aan oo u dhistaa huurada.
Dhismahan ayaa adkeynaya in qalabka guriga, sida makiinada weelka dhaqda ama mashiinka dharka lagu dhaqo, ay shaqeeyaan oo xitaa laga yaabaa inay jabaan. Sababtaas awgeed, musqulaha qubeyska ee barafka cad iyo saxannada si dhakhso ah ayey huruud isu beddelaan, oo dusha sare ee chrome-plated ee isku-darka ayaa lagu daboolay wasakhyo fool xun.
Habka ugu kalsoonida badan ee lagu ogaan karo sida adag ee biyuhu uga qulqulayaan tuubadaada waa inaad soo dirto muunad tuubo dareere ah si loogu baaro shaybaadhka. Waxaad ka heli kartaa ciwaannada shaybaadhka adeegga tixraaca ee qaybta Vodokanal ee gobolkaaga.
Laakiin adkaanta biyaha sidoo kale waxaa loo go'aamiyaa si madaxbannaan. Halkan waxaa ah afar siyaabood oo degdeg ah oo sahlan oo loo sameeyo.
1. Isku day xariijimaha tijaabada
Tijaabi xariijimaha go'aaminta engegnaanta biyaha. Waxaad ka iibsan kartaa dukaamada xayawaanka raba iyo tafaariiqda qalabka. Taas beddelkeeda, xariijimo lagu go'aamiyo heerka acid-saldhigga (pH) ee dareeraha.
Ku shub biyaha aad rabto inaad ku cabbirto adkaanta muraayadda. Ku dhex daadi fiilada tijaabada warqad oo leh labajibbaaran reagen dusheeda ah dareeraha.
Ka saar xariijimaha oo sug ilaa hal daqiiqo (muddada saxda ah ayaa lagu tilmaamay tilmaamaha). Iyada oo ay saameynayaan milixyada macdanta, fal-celinta kiimikaad ayaa bilaabma oo midabka barxadaha tijaabada ayaa isbedeli doona.
Qaabka: @ Just Sidorov / YouTube
Si loo go'aamiyo adkaanta biyaha, barbar dhig midabka daaqadaha tilmaamayaasha iyo muunada tilmaamaha.
Haddii aad isticmaalayso xariijimaha pH, xasuusnoow qaanuunka guud: marka ay biyuhu adkaadaan, way badan yihiin alkaline, taas oo ah, sarreeya qiimaha pH. Sida caadiga ah, biyaha jilicsan waxay leeyihiin pH ka yar 7, biyo adag oo ka sarreeya Heerarka pH ee Biyaha La Cabbitaanka / ATS Deegaanka 8.5.
2. Iibso mitirka milixda
Qalabkani waxa uu leeyahay laba electrodes oo ay tahay in la geliyo biyaha. Electrodes-yadu waxay abuuraan qulqulka elektaroonigga waxayna diiwaangeliyaan socodka korantada ee dareeraha, taas oo si dhow ula xiriirta qadarka magnesium iyo kalsiyum cusbada.
Qaabka: @Sergey MW / YouTube
Mitir milix ah.
Dhalo ama weel kasta oo kale.
Ku shub biyaha, adkaanta aad rabto inaad cabbirto, galaas, oo hoos u dhig korantada mitirka milixda gudaha.
Qalabku wuxuu u rogi doonaa korantada dareeraha dareeraha unugyada adagaanta biyaha ee laga aqbalay waddan gaar ah, oo ku tusi doona natiijada shaashadda.
Xiriirka Ruushka, halbeegga cabbiraadda waa waxa loogu yeero heerka adkaanta (° F), oo sidoo kale ah 1 mg-eq / l. Mitir milix ah oo shahaado ka haysta Federaalka Ruushka waxay ku shaqeeyaan nidaamkan.
Adag ee biyaha waxaa loo arkaa inay adag tahay. Biyo jilicsan. Biyo adag. Beddelka unugyada (degrees) ee engegnaanta biyaha. Heerarka adkaanta biyaha. Miisaska qiimaha engegnaanta biyaha. Jilcinta biyaha. Sida meesha looga saaro adkaanta biyaha / buug-gacmeedka injineernimada. Miisaska biyaha DPVA.ru oo leh tilmaame ka badan 10 ° J. Qiimaha 2 ilaa 10 ° W wuxuu u dhigmaa biyaha adag ee dhexdhexaadka ah.
3. Isticmaal saabuunta dharka lagu dhaqdo
Habkani wuxuu ku salaysan yahay mid ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee biyaha adag: Adag ee biyaha la cabbo waa liidata. Dukumeenti asal ah oo loogu talagalay horumarinta Tilmaamaha WHO ee tayada biyaha la cabbo / weelasha WHO ayaa la soo saaray. Waxay u baahan doontaa tijaabo kimistari yar.
Miisaanka jikada elektarooniga ah.
Biyo nadiif ah. Waxaad ka iibsan kartaa dukaamada qalabka ama kaalimaha shidaalka.
Cabbiraadda muraayadda awoodda 1 litir ama weel litir ah.
In yar oo saabuunta dharka lagu dhaqo ku daadi shabaggeedii oo si sax ah ugu cabbir 1 g miisaanka.
Ku rid saabuunta galaas oo ku dar 3-4 qaado oo biyo diirran oo diirran. Si tartiib ah, si aadan u samaynin xumbo badan, walaaq ilaa si buuxda u milmo.
Kadib, adoo isticmaalaya mastarad, ku dar biyo la miiray oo dhererkoodu yahay (milimitir) oo la mid ah boqolkiiba asiidh dufanka leh ee saabuunta. Tusaale ahaan, haddii aad qaadatay saabuun caadi ah oo ku calaamadsan 72%, dhererka biyaha galaaska waa in ay ahaataa 72 mm. Maskaxda ku hay in digsiga dhalada uu sidoo kale leeyahay dhumuc gaar ah, markaa ka cabbir tiirka biyaha xagga hoose, oo aan ka soo jeedin dusha miiska.
Si tartiib ah mar labaad u walaaq xalka saabuunta. Si tartiib ah uga saar xumbo haddii ay samaysay. Hadda waxaa jira saabuun aad u badan senti mitir kasta oo tiirka biyaha ah si ay ugu xidhaan dhammaan milixyada engegnaanta ee 1 litir oo biyo ah, haddii xooggoodu yahay 1 ° dH (shahaadada adag ee Jarmalka).
Ku shub 0.5 litir oo biyo qabow ah koob ama weel wax lagu cabbiro. Ku shub xal saabuun weelka ku jira durdur dhuuban oo si tartiib ah u walaaq ilaa aad ka ogaato in xumbo cad oo deggan ay ka sameysan tahay dusha dareeraha. Muuqaalkeeda waxay la macno tahay in saabuuntu ay si buuxda u xidhay milixdii adkaanta.
Cabbir dhererka saabuunta haray ee galaaska oo ka jar dhererka asalka ah. Markaa waxaad ogaanaysaa inta senti mitir ee xalka lagu shubay weel cabbiraadda.
sentimitir kasta oo ka mid ah xalalka la shubay waxa ay xidhay qadarka milixda engegnaanta ee u dhiganta 2 ° dH nus litir oo biyo tuubo ah. Taas macnaheedu waa haddii, tusaale ahaan, 6 cm oo xal ah waa in lagu shubaa si loo abuuro xumbo, adkaanta biyaha tuubada waa 12 ° dH.
Si loogu beddelo shahaadooyinka Jarmalka kuwa lagu isticmaalo Federaalka Ruushka, waxaad isticmaali kartaa xisaabiyaha internetka ee xisaabiyaha adagaanta biyaha / Mosvodokanal ee bogga Mosvodokanal. 12 ° dH = 4.3 ° F, taas oo u dhiganta biyaha adag ee dhexdhexaadka ah.
4. Isticmaal muraayad
Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qiyaasto sida adag ee biyuhu uga qulqulayaan tuubada. Laakiin ma bixin doonto macne gaar ah.
Biyo la kariyey ama la kariyey.
Adigoo isticmaalaya pipette, mari dhibic biyo ah oo la miiray oo ku dhufo dusha muraayad toosan. Sug inta dareeruhu uumi baxayo. Ka dibna falanqee labada xabo oo ay ku hartay dhalada.
Inta badan ee wasakhda biyaha tuubada ka timaadda, way ka duwan tahay inta ku dhow ee aan la fahmi karin ee biyaha la miiray, way sii adkaanaysaa.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida loo ogaado adkaanta biyaha guriga!